Iinwele ezimfutshane: sikubonisa indlela yokufumana inkangeleko eyahlukileyo | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele ezimfutshane: sikubonisa indlela onokujonga ngayo
UCarlos Rivera | | Isitayile esinenwele
Las iinwele ezimfutshane bayaphumelela kuninzi lwamadoda. Kwaye bayenza ngokuchaneka nokusebenza kwayo. Zonwabile, kulula ukuzigcina kwaye, nangona kunokubonakala ngathi zichasene noko zininzi izinto ezinokubakho kwisitayile.
Ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo siphonononge zonke iifayile ze iinwele ezimfutshane, namhlanje senza okufanayo ngokuhambisa a Ukukhetha Bukeka Ngawo onke amathuba enwele ngeenwele ezimfutshane. Ukusuka kwii-bangs, ukuya kwi-toupee, ukuya kwi-style ye-gradient yeenwele, phakathi kwabanye abaninzi.
1 IiBangs ngokuhamba
2 Ngaphantsi kwevolumu
3 I-Toupee, enye inwele yeenwele ezimfutshane
4 Umtya osecaleni
5 Isiphumo esixhonyiweyo
6 Isiphumo esihluziweyo
7 Amaza ebangs
Bathatha okuninzi ii-frond bangs zidityaniswe zaninzi intshukumo Uhlobo lwe pop Iinwele ezimise imeko yokuba zinxityiwe, phakathi kwabanye, ngoosaziwayo abanjengoChace Crawford ovela 'kwiNtombazana yeNtlebi', okanye umdlali weqonga uAshton Kutcher. Le iinwele ezinee-bangs zibeka iindlela, ngakumbi xa zenziwe nge Isandi kunye nomoya ongacwangciswanga. Sikuxelela indlela yokujonga.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa imveliso siya kuzomisa iinwele ngokupheleleyo sisebenzisa isomisi ngasemva ukufezekisa eso siphumo sokuwa kweebhokhwe esasizikhangele. Ukwenza isitayile khangela Eyona reconmebladale kukusebenzisa i-wax enesiphelo se-matte. Ngomthamo omncinci wemveliso elingana neamangile, siya kusebenza iinwele ngeencam zeminwe zikhombe ezantsi, sinokugxininisa kwi-bangs ngokugxininisa eminye imicu yayo. Umthwebeba Isichazi seMatte esivela kwifemu yeMatrix okanye ioyile UMateyu kaJohn Allan, Zezona zikhetho zibalaseleyo kwezinwele kwezi iinwele.
El Iqhubeka Ngenye yezona zinto zithandwa kakhulu, ezibonakaliswa yindlela eyahlukileyo phakathi kwezinye amacala amafutshane kakhulu kwisiphumo esinyibilikiweyo kunye nomphezulu omde nge ivolumu. abadumileyo njengoJustin Bieber, uDavid Beckham okanye uBrad Pitt babezona zonoonozakuzaku babalaseleyo khangela. Ukwenza isitayile sokusika kwaye, kuba konke kuxhomekeke kubude obukhethileyo obuphezulu, ungasebenzisa inani elingenasiphelo leemveliso. Ngaphambi kokuzisebenzisa ungasebenzisa imveliso ebonelela ngevolumu eyongezelelweyo kwizinwele zakho, kule meko i ityuwa yolwandle. Zifakwa ngeenwele ezimanzi kwaye iinwele zomile kusetyenziswa ibrashi ejikelezileyo kwaye zaphawula umaleko kusetyenziswa iintshukumo ezijikelezayo ukufezekisa ivolumu esiyifunayo.
Xa kuziwa kwisitayile khangela Ungasebenzisa iimveliso ezahlukeneyo, nangona zilunge ngolu hlobo nangona zilolu hlobo lweenwele ifayibha waxes ezivumela ukunika intshukumo kunye nevolumu ezinweleni. Ukufumana isiphumo esenziwe ngakumbi unokuzama I-Revlon Style Masters yoMdali weFayibha Wax. Okanye ukuba ukhetha umphumo wendalo kunye nokunyakaza, zama I-Homme yokukrola ifayibha ngo-L'oréal Expert Professionnel.
I-Toupee, enye inwele yeenwele ezimfutshane
I-classic 50s-ephefumlelweyo yitoupee yicwecwe lokucheba iinwele elingaze liphume ngesitayile. Abalinganiswa abathandwayo kakhulu njengeemvumi uBruno Mars, okanye eSpain uDavid Bustamante, baye baba ngoonozakuzaku abakhulu boku kucenga khangela. Ukufumana iinwele, kuya kufuneka womise iinwele ngebrashi ejikelezayo usebenzisa iintshukumo ezijikelezayo. Icebo lokwenza isitayile sesi siqulatho siqukethe lungisa ii-bangs ebunzi udale uhlobo lweliza eliphakanyisiweyo kunye nokutsala iziphelo zamaza ngokwawo umva.
Kule nwele iinwele ezimfutshane, inkcazo yeegels zisebenza kakuhle kakhulu, ezisebenzela zombini iziphumo ezimanzi nezomileyo. Kule meko siyacebisa Umkhosi weWella Sculpt, yeenwele ezichazwe kakuhle. Nangona ungafumana khangela Ukungaqheleki ngakumbi nangaphantsi kokuchazwa kweekhrim ezibonelela ukubamba, intshukumo kunye nokuchukumisa okuncinci kokukhanya, njenge I-Cream enegwebu yi-American Crew. Imveliso isetyenziswa ngeenwele ezomileyo ngetawuli kunye nokusebenza ngeminwe ukugqibezela okungagunyaziswanga, okanye ikama ukubuyela kwisitayile esichazwe ngakumbi.
Ezintle kwaye zintsonkothileyo Amacala eenwele ezahluliweyo abonelela ngumoya othandekayo wangoku kunye nexesha. Kuyinto khangela Inokwenziwa ngeentlobo ezahlukeneyo zobude kwaye ihlala ithanda zonke iintlobo zecandelo. Sikubonisa ukuba uyifumana njani khangela.
Ukufumana khangela kufuneka uzikame iinwele zakho zimanzi, ukumakisha indawo ngentlama yetiphu ecikizekileyo kunye nokuzoba iinwele ecaleni. Singalishiya icala liqhotyoshelwe okanye, ngokuchaseneyo, senze igagasi elincinci kwii-bangs njenge-mini-toupee. Kukho iimveliso ezingenakubalwa ukufezekisa oku jonga, kodwa i-ultra-strong ibambe iijel jonga ezimanzi njenge Isiphumo samanzi esingatshabalaliyo yiL'oréal Studio Line. Unokuzama udongwe olunikezela khangela Iziphumo ezomileyo zendalo ezinje Ukubumba udongwe kwiAmerican Crew.
El khangela ikama ukuya gangster lolunye utyekelo oluthi iye yaba yifashoni kwakhona ngenxa yobuhle bayo kunye nokulula. Yinwele enokwenziwa kuzo zonke iintlobo zeenwele, kwaneenwele ezinde kakhulu.
Ukufezekisa iinwele kwiinwele ezimfutshane ezinefuthe elimanzi esinokuzisebenzisa okanye iigels zokuzilungisa ezigabadeleyo ezinje Ukuma ngokugqithileyo kunzima ngoRedken waMadoda, Kama iinwele umva ngekama entle yespiki. Ukulungisa i khangela ngesiphumo esimakishwe ngakumbi kwaye, ukuba ufuna ukulungiswa ngakumbi, sinokusebenzisa izitshizi ezinje Ukutshiza iinwele ngokugqithileyo kwi-HD eqinileyo.
Izinwele ezimfutshane kunye Isinwele esinefuthe Yenye yeendlela eziza ngamandla. Kwaye bayayenza ngenxa yeempembelelo zabo ezingaqhelekanga nezingacwangciswanga, ekulula kakhulu ukuba zifezekiswe.
Iziphumo ezichaseneyo kwaye ngokungathi uvukile ebhedini ungazama Ngaphandle kwebhedi nguL'oréal Studio. Ukongeza, unokuzama ezinye iintlobo zeway zokwakha kunye ne-wax eyomeleleyo yokulungisa i-wax ngokuxhathisa kwe-elastic. Ingatshabalali yiL'oréal Studio Line.
Los I-Wave bangs yenye yeendlela ezintsha zokucheba iinwele zamadoda eziqala ukuseta umkhwa phakathi kwamadoda afuna iinwele ezimfutshane. Kule nwele udinga i-bangs kunye nocingo olude ngokwaneleyo ukwenza umtshangatshangiso.
Ukufumana khangela, kwaye emva kokumisa iinwele ngesihlwibi seenwele, eyona nto intofontofo noluncedo kukusebenzisa isinyithi. Thatha i-wick ukuba ijike kwaye ujike isinyithi kwicala elichasene newashi. Ukugcina ukujongeka kunye nokwenza ukuba yomelele ngakumbi, inokulungiswa ngohlobo lokuncamathisela olunje 4 Dlala iTouch nguOsis + kwaye ulungise umtshangatshangiso nge I-Osis + Impompo yokuQinisa, bobabini abavela eSchwarzkopf Professional.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele ezimfutshane: sikubonisa indlela onokujonga ngayo
Izikhokelo zesitayile eziyi-8 zokunxiba isuti